Zahana toetra ny faharetan’i LeBron James - ewa.mg
Basket - Sport - Zahana toetra ny faharetan’i LeBron James
Faharetana. Hatramin’ny nahatongavan’i Lebron James tao amin’ny Lakers, dia eo ambavan’ny olona rehetra aty Californie izany teny izany, na dia tsy mora aza ny mampihatra azy. Kanefa na dia kely fotsiny foana aza ny faharesena azon’izy ireo, dia mampikorontana ihany ireo tsy fahombiazana eo amin’ny defense, indroa nandresy tao anatin’ny lalao fito.
Koa dia nibedy mafy an’i Luke Walton i Magic Johnson, na dia mamerimberia foana isaky ny lalao ny « King » fa tsy hilamina tampoka ohatry ny magie magie io zavatra io.
« Izany no notoriako hatramin’ny fiatombohan’ny saison : mila faharetana », araky ny nohazavainy tany Portland 10 andro lasa izay. « ny tsirairay aminay mahalala fa tokony ho hitanay izay tsara vitanay sy izay tsy mety ihany koa. Ny mampitombo an’izay fiaraha-milalao izany dia tsy mora araky ny heritreretinareo. Tsy tahaka ny hoe zavatra mamatam-bonona io. »
Na izany aza tsy mahataty faharesena i Lebron ary manomboka leo ihany ko aizy.
« Tsy niteny mihitsy aho, fa fantatrareo aho, fantatrareo ny toetrako », raha ny nazavainy tamin’i Yahoo ! Sports. « Saika kivy aho tamin’ny herinandro. Tsy maintsy nipetraka aho dia niteny tamin’ny tenako ho : « efa fantatr’ialahy tsara ny zavatra nidiran’ialahy ». tsara ho anahy izany lalana nodiavina izany. Mila manahy ny faharetana aho. »
Hatramin’io fiatombohana sarotsarotra io, dia nihezaka ny Lakers. Marina fa nananosarotra ny fandresena kanefa fandresena dimy ao anatin’ny lalao enina izao ry zareo, ka dia efa mihoatra ny 50% izany ny fandresena ananany.
Miampy ny fanampian’i Tyson Chandler eo amin’ny Defense, dia afaka mifantoka amin’izay izao ny Lakers. Ny tapa-bolana ho avy izao izao dia afaka ny hanaovana an’izay satria mila mandray an’ny Portland sy Utah izy ireo, ny lalao roa amin’ny Magic sy ny dia atao ho any Miami sy i Cleveland dia mety mbola afaka hanampiana ny fandresena. Sady hampatsiahy zavatra an’i Lebron ihany koa…
Lakers - Lebron James - Nba